Amosi 1 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Amazwi ka-Amosi, obengowakubo abalusi baseTekowa, awawabonayo ngokusingisele kwaSirayeli, ngemihla kaUziya ukumkani wakwaYuda, ngemihla kaYarobheham unyanaunyana kaYowashe, ukumkani wakwaSirayeli, iminyaka emibini phambi konyikimo.
2 Wathi: UYehova uyabharhula eZiyon, akhuphe ilizwiilizwi lakhe eYerusalem, amakriwa abalusiabalusi enze isijwiliisijwili, incopho yeKarmele yome.
3 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zeDamasko, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le ntongenxa yokuba bambhulayo uGiliyadi ngezibhulo zesinyithi:
4 ndiya kuphosa umliloumlilo endlwini kaHazayeli, utshise iingxande ezinde zikaBhen-hadade.
5 Ndowaphula umvalo weDamasko, ndinqumle ummi wasesihlanjeni seAven, nophethe intonga yobukumkani eBhete-edeneden; bathinjwe abantu bakwa-Aram, baye eKire; utshoutsho uYehova.
6 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zeGaza, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le ntongenxa yokuthimba kwabo abathinjwa ngokuzeleyo, ukuze babanikele kuEdom:
7 ndiya kuthumela umliloumlilo eludongeni lweGaza, utshise iingxande zayo ezinde.
8 Ndomnqumla omiyo eAshdode, nophethe intonga yobukumkani eAshkelon; ndisibuyisele isandlaisandla sam phezu kwe-Ekron, atshabalale amasalela amaFilisti; itsho iNkosi uYehova.
9 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zeTire, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le ntongenxa yokubanikela kwabo abathinjwa bephelele kuEdom, abawukhumbula umnqophiso wobuzalwana:
10 ndiya kuthumela umliloumlilo eludongeni lweTire, utshise iingxande zayo ezinde.
11 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zakwaEdom, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le ntongenxa yokumsukelisa kwakhe umzalwana wakhe ngekrele, eyilahlile imfesane yakhe, umsindoumsindo wakhe uhlala uqwenga, emana egcine ukuphuphuma komsindo wakhe:
12 ndiya kuthumela umliloumlilo kwaTeman, utshise iingxande ezinde zaseBhotsera.
13 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zoonyana baka-Amon, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le nto ngenxa yokuqangqulula kwabo abamithiyo baseGiliyadi, ukuze bandise umdaumda wabo:
14 ndiya kubasa umliloumlilo eludongeni lweRabha, utshise iingxande zayo ezinde, kuhlatywa umkhosi ngemini yokulwa, kukho umoya ovuthuzayo ngemini yesaqhwithi.
15 Uya kuthinjwa emke ukumkani wabo, yena nabathetheli bakhe kunye naye; utshoutsho uYehova.
Exploring the Meaning of Amosi 1
IGenesis 27:41, 36:33
1 Samuweli 6:17
2 Samuweli 12:31, 14:2
2 Kumkani 8:12, 14:23, 28, 15:16, 16:9
2 yeziKronike 20:10, 11, 21:16, 17, 26:1
UIsaya 8:4, 17:1, 21:11, 23:1, 33:9, 34:5
NguYeremiya 25:30, 28:8, 47:1, 49:1, 7, 23
UHezekile 21:25, 25:1, 12, 15, 26:1, 27:1, 27, 28:1, 30:17, 35:1
UHoseya 1:1, 10:8, 14:1
Amosi 2:2, 5, 3:8, 9, 5:5, 7:14, 9:7
UZefaniya 2:4, 8
UZekariya 9:1, 2, 3, 5, 14:5